TRUESTORY: March 2014
အငြိမ်းစားကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်များနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများအား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) မိသားစုများက ဂါရ၀ပြုကန်တော့
မဟာအံ့ထူးကံသာ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီးပရဝုဏ်ဧရိယာ အတွင်းမှ ရတနာပစ္စည်းများ တူးဖော်တွေ့ရှိခြင်း
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ရှိ မဟာအံ့ထူးကံသာ ဆုတောင်းပြည့် ဘုရားကြီး၏ အရှေ့ ဘက် ကျောက်တောင်ကုန်းအား တန်ဆောင် တိုင်ပွဲ ကျင်းပရန်အ
တွက် မြေပြုပြင်ခြင်း ဆောင် ရွက်ခဲ့ရာ ၉-၃-၂ဝ၁၃ ရက်နေ့ ညနေ ၁၅၃ဝ နာရီခန့်တွင် ရတနာ ပစ္စည်းများ ထည့်ထားသော ဒန်ချိုင့်ဟောင်း တစ်လုံးအား တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
အားလုံးနည်းတူ စစ်လက်နက်စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျွှန်တော့်အတွက်တော့ ဒီကနေ့ဟာ ရင်ခုန်စရာအကောင်းဆုံးနှင့် ဂုဏ်အယူရဆုံးသော နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်...။ (၆၈)နှစ်မြောက်
Posted by Gentle Men at 9:15 AM No comments:
အောင်သူရ | Thursday, 27 March 2014
မကွေးဆရာတော် အရှင်ဦးပါမောက္ခက မိမိနိုင်ငံ၏ တည်ဆဲဥပဒေကိုမလိုက်နာ၊ မိမိနိုင်ငံ၏အလံ ကို အလေးမပြုသူများကို အမိနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်ရန်အပြင်းအထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း ကို မတ်လ ၂၆ ရက်နေ့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
" နိုင်ငံရေးဆိုတာ နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်တဲ့အရေးကို နိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တယ်။ ကျုပ်တို့နိုင်
စစ်သားဆိုတာ ပြည်သူထဲက ပြည်သူပဲဟုဆိုသူ ဆရာမြ သန်းစံနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
တပ်မတော်နေ့ နီးလာလျှင် ရုပ်သံလိုင်းများ မှ ဝေလည်းမွှေး၊ ကြွေလည်းမွှေး ရုပ်ရှင်ဇာတ် ကားကို နှစ်စဉ် ပြသလေ့ရှိသည်။ အဆိုပါ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရုံတင်စဉ်က ပရိ သတ် နှစ်ခြိုက်စွာ အားပေးခဲ့ ပါသည်။ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘဝအတွေ့ အကြုံတွေ နဲ့ ပေါင်းစပ်ပြီး ဝေ လည်းမွှေး၊ ကြွေ လည်းမွှေး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား၊
မြန်မာ့အစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး ကွပ်ကဲမှု ဦးစီးဌာန (အက်ဖ်ဒီအေ) ဟာ ထိုင်းနိုင်ငံက တင်သွင်းလာတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း ၂၁ မျိုးကို စစ်ဆေးခဲ့ရာမှာ အဆီချ ခရင်မ်နဲ့ အသားလှဆီ အမျိုးအစား ၉ မျိုးမှာ ကျန်းမာရေးအတွက် ဘေး
အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ တားမြစ် ဓာတုပစ္စည်းတွေ ပါဝင်နေတာ တွေ့ရှိလို့ အများပြည်သူ သုံးစွဲဖို့ မသင့်ကြောင်း ဒီကနေ့
Posted by Gentle Men at 4:11 PM No comments:
“ပေးဆပ်မှုကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ မြင့်မြတ်နိမ့်ကျတဲ့ ဘ၀ အမှတ်တရ...”
တစ်ရက် အလယ်တန်းကျောင်းသားဘ၀ ညနေဘက် ကျူရှင်ဆင်းတော့ တပ်လိုင်းခန်းထဲမှာ အိမ်နီး ချင်း သူငယ်ချင်း ညီမလေးရဲ ဖေဖေ ပင်လယ်ပြင် လုံခြုံရေး စစ်ဆင်ရေးမှာ မုန်တိုင်းအရမ်း ထန်နေ တဲ့ အချိန် ရဲဘော်များနဲ့အတူ သင်္ဘောအခြေအနေထွက် ကြည့်ရင်း Life Jacket ၀တ်ထား ပါလက် ပင်လယ်ကြီးရဲ့ ၀ါးမျိုခြင်းကို ခံလိုက်ရတယ်။ တစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ ရှာမရ။ အဲဒီ ဆရာကြီးအတွက် ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်ကျပေါ့ စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်း ၂ပတ်ကျတော့ တပ်ပြေးကြေငြာ ပေးခြင်း
Posted by Gentle Men at 3:12 PM No comments:
တပ်မတော်နေ့ကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့ခဲ့ကြသူအနုပညာရှင်တို့ အမှတ်တရ.
တစ်ချိန်က တပ်မတော်နေ့ကို တော်လှန်ရေးနေ့အခမ်းအနားအဖြစ် တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာအထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပခဲ့ကြပေသည်။ အနယ်နယ်အရပ်ရပ် တွင်လည်း ပိုစတာ နံရံကပ်အနုပညာပြိုင်ပွဲများ၊ ကဗျာ၊ စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲများ၊ ကျပန်းစကားပြောပြိုင်ပွဲများဟူ၍ အသီးသီး ပူးတွဲကျင်းပခဲ့သလို ဂုဏ်ပြုစစ်ကြောင်း ချီလာ သည့် တပ်မတော်သားများ အား မြို့မိမြို့ဖ ပြည်သူ ပြည် သားများ က သောင်းသောင်း ဖြဖြကြိုဆို၍ ဂုဏ်ပြုပန်းကုံးစွပ် ကြပေ သည်။
ထိုကဲ့သို့သော တပ်မတော် နှင့် ပြည်သူကြည်ဖြူညီတူ စိတ်ထားဖွဲ့ မြင်ကွင်းပုံရိပ် တို့ကား မြန် မာနိုင်ငံ၏ အနာဂတ် ခွန်အားသစ်များ အနေနှင့် ဖြစ်တ ည်ကျန် ရစ်စေ ခဲ့ပါ သည်။ ထိုကဲ့သို့သော
ယနေ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှသံရုံးရှေ့တွင် Dahaka Tribune သတင်းဌာန ပါဆောင်းပါးအား ဆန္ဒပြသည့်ပုံရိပ်များ
ကရင်ပြည်နယ် ၊ မြ၀တီမြို့နယ် ၊ ရှေ့ရှမ်းကျေးရွာ ၊ ညောင်နန်းသာကျေးရွာ၌ KNU/KNLA ငြိမ်း ချမ်းရေး ကောင်းစီအမည်ခံ လက်နက်ကိုင် NLD ပါတီဝင် (၃) ဦးကို KNU/KNLA ငြိမ်း ချမ်းရေးကောင်စီ တာဝန်ရှိသူများက (၁၀.၃.၂၀၁၄) ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်း ငြိမ်း ချမ်းရေး ကောင်စီမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတစ်ဦးက အတည်ပြုပြောကြားသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စကို စုံစမ်းမေးမြန်းရာတွင် အမျိုးဘာသာ သာသနာကို ထိခိုက်ခြင်းမှ စတင်လာခဲ့သည် ဟု သိရသည်။၎င်းကိစ္စကို အမျိုးဘာသာ သာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့မြ၀ တီမြို့နယ်အတွင်းရေး
Posted by Gentle Men at 2:49 PM No comments:
တော်များ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရကြောင်း သိရသည်။ “ဒကာမကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ အခြေခံဥပဒေ မပြင်လိုသူ ဆိုပြီး
'' တပ်မတော်သည် အင်အား တောင့်တင်းပြီး
စွမ်းရည် ထက်မြက်သော ခေတ်မီသည့် တစ်ခု
တည်းသော မျိုးချစ် တပ်မတော် ဖြစ်သည်''ဟု
ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ၏
ဖွဲ့စည်း ပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂ဝဝ၈ ခုနှစ်)
ပုဒ်မ ၂ဝ (က)နှင့် ပုဒ်မ ၃၃၇ တို့တွင် အတိ
အလင်း ပြဌာန်း ထား သည်။ နိုင်ငံတော်၏
အတိတ် သမိုင်းအား မှန်ကန်စွာ လေ့လာ သုံးသပ် ကြည့်ပါက တပ်မတော် သည် လွတ်လပ်ရေး ကြိုးပမ်းမှု သမိုင်း၊ ပြည်ပ ကျူးကျော်မှု နှိမ်နင်းရေး သမိုင်း၊ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး နှင့် အချုပ်အခြာ အာဏာ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်မှု သမိုင်း၊ ဒီမိုကရေစီ နိုင် ငံတော်သစ် အဖြစ် ဖော်ဆောင်ရေး သမိုင်း တို့၌ တပ်မတော် သည် မှန်ကန်သော ရပ်တည်ချက်၊ ထက်မြက်သော ဦးဆောင်မှု တို့ဖြင့် '' နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေး အတွက် အဓိက အကျဆုံးသော လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့ ဖြစ်သည် '' ဆိုသော ပြဌာန်းချက် ကို မှတ်ကျောက်တင်
Posted by Gentle Men at 2:42 PM No comments:
ဘာ အဓိပ္ပာယ် လဲ
NLD အလံက အလယ်မှာ ရောက်ပီး နိုင်ငံတော် အလံက ဘေးမှာ တဆင့်နိမ့်ထားတယ် နိုင်ငံတော် အလံက NLD အလံထက် နိမ့်ကျနေလို့လား ???
ဘယ်လို တွေးရမလဲ မသိတော့ဘူး
Nld အနေနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဇာတိမှန်တွေပြလာတယ် သူတို့အနေနဲ့ သိက္ခာမဆည်နိုင် တာတြွေ ဖစ် လာ တယ် Nld အလံကို ထိပ်ဆုံးမှာ တပ်ချင်တယ်ဆိုရင် နောက်ဘ၀မှာပဲ ဆုတောင်း ဖို့ အကြံပေးလိုက်ပါတယ် ဒေါ်စုရေ...
Posted by Gentle Men at 2:38 PM No comments:
ဒီအကြောင်းကို အချိန်ပေးပြီး စောင့်ကြည့်နေရာက ဒီနေ့တော့ မေးရတော့မှာ မို့ မေးပါတော့မယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို စစ်တွေ မောင်တော ဒေသများကို လူထဆန္ဒခံယူပြီး ခွဲထုတ်ကာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင် ငံထည့်သွင်းရန် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ အခြေစိုက် Dahaka Tribune သတင်းဌာန၏ ရေး သား ဖော်ပြချက်က မြန်မာပြည်တွင်းမှာ အတော် ဂယက်ရိုက်သွားတာ အားလုံးအသိပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော် အနေနဲ့တော့ ဒေါသလည်း ဖြစ်သလို ၊ အစိုးရပိုင်းက တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ အတိုက်အခံ သမားတွေ ၊ စာနယ်ဇင်း သမားတွေ ဟာ ဘယ်လိုများ တုန့်ပြန်သံ ထွက်လာလေမလဲလို့ စိတ်ဝင်
မြန်မာလူမျိုးတွေ စေတနာကောင်းတယ်.. ဒါပေမယ့် ဘာလို့ အများစုဆင်းရဲနေကြလဲ..
ဒါကို လူတစ်ယောက်က ဒီလိုဖြေသွားပါတယ်..
"အစိုးရကို အပြစ်မပုံချဘဲ လူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကိုပဲ ဝေဖန်ရမယ်ဆိုရင်ပေ့ါ....
မြန်မာအများစုက TEAM WORK အားနည်းတယ်..မညီညွတ်ဘူး. .ဘေးကနေ သွေးခွဲရလွယ်တယ်..
အပြင် ဂီတဘက်မှာပါ မျှပြီး
စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ ‘ဧဒင်ရဲ့ နတ်သမီး’
ရုပ်ရှင်ကားကြီးကို ရိုက်ကူး ပြီးစီးသွား
ရုပ်ရှင် ကားကြီးဖြစ်တဲ့ ‘ဧဒင်ရဲ့
နတ်သမီး’ ဆိုတာရိုက်ပြီးသွားပြီ။ ကိုစိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်နဲ့ပါ။ လောလော ဆယ်တော့ ဗီဒီယို ၅ ကား၊ ၆ ကားလောက် ရိုက်ထားပါတယ်။
အရက်စွဲနေသောသမီးက မိခင်ထံမှ အရက်ဖိုးတောင်းရာ မရ၍ နေအိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့မှု ဟားခါးမြို့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ချင်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှ သတင်းရရှိသည်။
ဟားခါးမြို့၊ ဈေးသစ်ရပ်ကွက်ရှိ အိမ်တစ်အိမ်တွင် မတ်လ ၁၆ ရက် ည ၇ နာရီ ၄၅ မိနစ်ခန့် က မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မိနစ်
Posted by Gentle Men at 9:23 AM No comments:
ကားကို အရှိန်တင်မောင်းနှင်လို့ ၄ ဒေါ်လာ ဒဏ်ရိုက်ခံခဲ့ရတဲ့ ၂နှစ် အရွယ် ကလေးလေး
အသက် ၂နှစ်အရွယ် Za’Dariyah Mishaw ဆိုသူ ကလေးမဟာ အိမ်အပြင်
ဘက်]မှာ ခြေ နင်းကားလေးကို မောင်းနေခဲ့ပါတယ်။ ရဲအရာရှိ Christian Velascoဟာ Za’Dariyah ကို ဘေးရပ်ခိုင်းခဲ့ပြီး အရှိန်မြင့် မောင်းနှင်မှုအတွက် ၄ဒေါ်လာ တန် ချလန်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
သာမန် ယာဉ်မောင်းတွေ အဖို့တော့ ချလန်ဖြတ်ခံရပြီဆိုရင် စိုးရိမ်ပူပန် တတ်ကြတာပေါ့။ ဒါပေမဲ့ Za’Dariyah Mishaw လေးကတော့ အချိန်ဆိုင်းမနေဘဲ ၄ဒေါ်လာ ဒဏ်ငွေဆောင်ဖို့ ရဲဋ္ဌာနကိုသွားချင်ခဲ့ပါတယ်။
“သူက ခပ်မြန်မြန်ကို နင်းနေခဲ့တာ။ သူ့ကိုမှီဖို့တောင် မနည်းလိုက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ မှီခဲ့ပါတယ်။ သူ သိပ်တော်တာ။” လို့ ရဲအရာရှိကပြောပါတယ်။
ချလန်မှာ ဒဏ်ငွေဘယ်လောက်ဆောင်ရမှာလဲ လို့ Za’Dariyah ကိုမေးကြည့်တော့ “၄ ဒေါ်လာ။”
ထိုင်းအစိုးရသည် ဇန်နဝါရီလ (၂၂)ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အရေးပေါ် အခြေအနေ သတ် မှတ်ကြေညာမိန့်ကို ရုပ်သိမ်းပေးရန် သဘောတူညီခဲ့သည်။ ယင်းလုပ်ဆောင်မှုသည် ဘန်ကောက်မြို့တော်သို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာစေရန် ဆွဲဆောင်နိုင် မည်ဟု အစိုးရက မျှော်လင့်လျှက် ရှိသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဝန်ကြီးချုပ်
အနေတွေက ပြောင်းလဲသွား ပါပြီ။ သူမ သမ္မတဖြစ်မယ် မဖြစ်ဘူးဆိုတာကိုတော့
Posted by Gentle Men at 8:51 AM No comments:
လွန်ခဲ့တဲ့၃ နှစ်လောက်က ကျွန်တော် ဖြစ်ခဲ့တာပါ။မန်းလေးမှာ
ကားတစ်စီးကို ....ယာဉ်ရပ်နားခွင့် ၃၀၀ ကောက်ပါတယ်…တရားဝင်
ကောက်ခံခွင့်ပြုတာက ၁၀၀ ပါ …..
လမ်း၈၀ မိုးကုတ်ဒေါ်ရှန် ခေါက်ဆွဲဆိုင်က အထွက် …ရပ်နားခွင့် ကောက်တဲ့ ကိုယ်တော်နဲ့ စ ငြိ ပါတယ်…
ကိုယ်တော်ချော က အသက် ၂၄ ၂၅ လောက်….ဗလတောင့်တောင့် ဆေး
Posted by Gentle Men at 8:46 AM No comments:
ပင်လယ်ပြင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ကြေညာ
တပ်မတော်(ရေ)မှ စစ်ရေယာဉ်များသည် မတ် ၁၉ ရက်မှ ၂၇ ရက် အတွင်း ပင်လယ်ပြင်လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် လက်နက်များ လေ့ကျင့်ပစ်ခတ်ခြင်းများကို ကိုကိုး ကျွန်းအရှေ့ရေပြင်တွင် လေ့ကျင့် ဆောင်ရွက်သွား
လေ့ကျင့်ခန်းဧရိယာအဖြစ် Point A မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၃၆ မိနစ်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၀၆ မိနစ်၊ Point B မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၄ ဒီဂရီ ၃၆ မိနစ်၊ အရှေ့လောင်ဂျီ တွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ်၊ Point C မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၅၆ မိနစ်၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၄၇
မိနစ်နှင့် Point D မြောက်လတ္တီတွဒ် ၁၃ ဒီဂရီ ၅၆ မိနစ်၊
Posted by Gentle Men at 5:37 PM No comments:
မြန်မာပြည်တစ်နံတစ်လျားမှ အများပြည်သူများ စိတ်အဝင်စားဆုံး
သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်သည့် Mister & Miss University 2014 ပြိုင်ပွဲကို
ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရန် စခန်းဝင် လေ့ကျင့်နေစဉ် သေဆုံးခဲ့သော ပြိုင်ပွဲဝင် ကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်သူ မောင်ကျော်ဇောဟိန်း၏
သေဆုံးမှု အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်လာရေး အတွက်စုံစမ်း စစ်ဆေးမှု
များ ပြုလုပ်နေရာ နောက်ဆုံး စစ်ဆေးချက် များ ထွက်ရှိလာပြီ
သို့ဖြစ်ပါ၍ ၄င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးသူမောင်ကျော်ဇောဟိန်း၏ အစ်ကိုရင်းဖြစ်သူ ကိုအောင်ကိုကိုအား ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရာ..
Posted by Gentle Men at 5:35 PM No comments:
မတ် ၁ဝ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ အမေရိကန်အခြေစိုက်East-West
Center (EWC) ကစီစဉ်သော စာနယ်ဇင်း လွတ်လပ်ခွင့်အတွက်
စိန်ခေါ်မှုများ challenges ofaFree Press ခေါင်းစဉ်ဖြင့်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သတင်း မီဒီယာ ညီလာခံ (International
Media Conference ) ကို ရန်ကုန်မြို့ရှိ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်
မာနိုင်ငံ ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များအသင်း
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ထိုင်းနိုင်ငံမှ Mr. Kavi Chong Kittavorn
"ပျောက်ဆုံးနေသော လေယာဉ်ကြီးကို လကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရှိ"ဟူ၍ Sunday Sport မျက်နှာဖုံးတင်"
လန်ဒန်၊ မတ် ၁၈
"ပျောက်ဆုံးနေသော လေယာဉ်ကြီးကို လကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရှိ"ဟူသည့် သတင်းကို မတ် ၁၄ ရက်ထုတ် Sunday Sport သတင်းစာမျက်နှာ ဖုံးတွင် ဖေါ်ပြထားသည်။
လေယာဉ်ကြီးကျရောက်သဖြင့် လကမ္ဘာပေါ်ဝယ် အရာထင်နေသော ဓာတ်ပုံကိုလည်းယင်းမျက်နှာ ဖုံးတွင်ပင် ဖေါ်ပြထားပြန်သည်။
Sunday Sport သတင်းစာကို ၁၉၈၆ ခုနှစ်က စတင်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အညှီအဟောက် သတင်းများ၊ အတင်းအဖျင်းသတင်းများနှင့် မဖြစ်နိုင်သောသတင်းများကို ဖော်ပြသည့်
ယင်းသတင်းစာဝယ် လန်ဒန်မှ နှစ်ထပ်ဘတ်စ် ကားကြီးတစ်စီးကို အန္တာတိကတိုက်ရေ ခဲပြင်အောက်တွင်တွေ့ရှိ၊ ဒုတိယကမ္ဘာ စစ်အတွင်းက ဗုံးကြဲလေယာဉ်ကြီးတစ်စီးကို လကမ္ဘာပေါ်တွင်တွေ့ရှိဟူသည့် သတင်းများကို လည်းဖော်ပြ ခဲ့ဖူးသည်။
Ref- Sunday Sport
Posted by Gentle Men at 5:24 PM No comments:
from - RFA Burmese
ဥရောပ (၄) နိုင်ငံက စာနယ်
့ မြန်မာနိင်ငံမှာ ပထမဆုံး နိုင်ငံ
တကာ အဆင့်မီ သတင်းပညာ
ဂျာမနီ၊ ဒိန်းမတ်နဲ့ ဆွီဒင်အခြေစိုက်
Posted by Gentle Men at 5:21 PM No comments:
အမေရိကန်ကို “ပြာမှုန့်” ဖြစ်အောင် ရုရှလုပ်နိုင်ဟု ရုရှ နိုင်ငံပိုင်ရုပ်သံ ဆို
ကရိုင်းမီးယားဒေသနှင့် သက်ဆိုင်သော တင်းမာမှုများ မြင့်တက်နေသည့် အချိန်နှင့် တစ်ပြိုင်နက်တည်း၌ ရုရှနိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံဌာနမှ အမေရိကန်နိုင်ငံကို “ပြာအဖြစ် ပြောင်းလဲ သွားစေရန် ရုရှနိုင်ငံသာလျှင် ပြုလုပ်နိုင် သည်” ဟု ရုရှရုပ်သံမှ မတ်လ ၁၆ ရက်က ဖော်ပြခဲ့ သည်ဟု အေအက်ဖ်ပီ သတင်းတစ်ရပ် တွင် ဖော်ပြ
ပျောက်ဆုံး မလေးရှား လေယာဉ်ပေါ်ပါ လေယာဉ် အင်ဂျင်နီယာ တဦးနှင့် ပတ်သက်ပြီး စစ်ဆေးနေ
မလက္ကာ ရေလက်ကြားတွင် မတ်လ ၁၃
ရက်နေ့က ရှာဖွေရေးနှင့် ကယ်ဆယ်ရေး
(SAR) လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တော်ဝင်
မလေးရှား လေတပ်မှ စစ်သည်တဦး
မလေးရှား ရဲတွေက ပျောက်ဆုံး နေဆဲ
မလေးရှား လေယာဉ် MH 370 ပေါ်က
ခရီးသည်တွေ အထဲမှာ ပါသွားတဲ့ လေ ယာဉ်
ကိစ္စတွေဟာ နေရာခွဲဝေမှုပိုင်းနဲ့လဲဆိုင်သလို ၊ပြည်သူယုံကြည်လေးစားရမယ့် လွှတ်တော် ကိုယ်
မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိုးကုတ်မြို့ရှိ ရွှေဆိုင်နှစ်ဆိုင်သို့ ဓားပြတိုက်ရာတွင် အသုံးပြုခဲ့ သည့် သေနတ်များ မှာ လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုမှ ငှားရမ်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများက ထွက်ဆို ထားကြောင်း တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
ယခုအခါ ရွှေဆိုင်ဓားပြတိုက်မှု ဖြစ်စဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု သံသယ ရှိသော
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မလေးရှား လေယာဉ်ကို ရှာဖွေရာမှာ အခုအခါ အနောက်ဘက်ပိုင်းကို တိုးမြှင့်ပြီး အိန္ဒိယ သမုဒ္ဒရာထဲမှာပါ ရှာဖွေနေတယ်လို့ မလေးရှား အစိုးရက အတည်ပြု ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
လေယာဉ်ဟာ အဆက်အသွယ် ပြတ်တောက်ပြီး နောက်ပိုင်း နာရီ
မလေးရှားနိုင်ငံကနေ တရုတ်နိုင်ငံကို ပျံသန်းစဉ် လမ်းခုလတ်မှာ ပျောက်ဆုံး သွားတဲ့ မလေးရှား ခရီးသည် တင် လေယာဉ် ကို နိုင်ငံတကာက ၀ိုင်းဝန်း ရှာဖွေနေတာမှာ အခုဆိုရင် မြန်မာနိုင်ငံကလည်း ပူးပေါင်း ပါဝင်လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ပျောက်ဆုံးနေတာ သီတင်း တစ်ပတ်ရှိသွားပြီဖြစ်တဲ့ မလေးရှားလေကြောင်းပိုင် Boeing 777 လေယာဉ်ကို အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲအထိ တိုးချဲ့ရှာဖွေဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် မြန်မာနိုင်ငံ
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ မလေးရှားလေယာဉ် ဟာ ရေဒါစက်ကွင်း ကနေပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ လေးနာရီ
လောက်ကြာအောင် ဆက်ပြီး ပျံသန်းနေနိုင်တယ်လို့ လေယာဉ်ပျောက် ရှာဖွေရေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အမေရိကန် အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားလိုက်ပါ တယ်။ ဂျက်လေယာဉ်ဟာ အချက်ပေးသံတွေ
White Card မဲမပေးရေး တပ်မတော် သား ကိုယ်စားလှယ်များမှ တခဲနက်ထောက်ခံနေကြပုံ
တကယ် မင်္ဂလာရှိတဲ့ သတင်းလေးပါ..။
၁၂ - ၃ -၂၀၁၄ နေ့ နေပြည်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာ
အေးမောင်တင်သွင်းသောwhite ကဒ်ကိုင်ဆောင် သူများ ၊ မဲမပေးရအဆိုကိုဘူးသီးတောင်မြို့နယ်
တရားများဟောကြားရန်ဟုဆို ကာ ရောက်
ရှိနေ သည့် ဦးဝီရသူက ရခိုင်ပြည်နယ်လုံခြုံရေး
အတွက် စစ်တပ်အင်အားကို ရုတ်သိမ်း လိုက်ပါ
က ပဋိ ပက္ခဖြစ်ပွားနိုင် သည်ဟု မတ် ၁၂ ရက်
တွင် မဇ္ဈိမကို မိန့်ကြားသည်။
တွင်လုံခြုံရေး ယူ ထားသည့်စစ်တပ်
များကို မရုတ်သိမ်းသင့်ဟု ဦးဝီရသူက
“စစ်တပ်သာမရှိရင် အချိန်မရွေး ပဋိပက္ခတြွေ
ပန်ဖြစ်နိုင်တယ်”ဟု ဦးဝီရသူက မိန့်ကြား
ဦးဝီရသူသည် ရခိုင်ဒုက္ခသည်စခန်း သုံးခုကို ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ဒေသလုံခြုံရေးအခြေအနေကို သုံးသပ်လိုက် ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘာသာနှစ်ခု ငြိမ်းချမ်းစွာ ယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်ရေးအတွက် အစ္စလာမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်
Posted by Gentle Men at 7:56 AM No comments:
မလေးရှား၏ မပွင့်လင်းမှုများကြောင့် ပိုမိုရှုပ်ထွေးလာသည့် လေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှုကြီး
ပျောက်ဆုံးနေသော မလေးရှား ခရီးသည်တင် လေယာဉ်ကို ရှာဖွေနေမှုသည် မလေးရှား စစ်ဘက် ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များ၏ မပွင့်လင်းမှုနှင့်အတူ ပိုမိုရှုပ်ထွေး ခက်ခဲလာနေပြီဟု သတင်းများ က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ယခုအခါ မလေးရှားမှ တရုတ်နိုင်ငံဘက်သို့ ဦးတည်ပြီး အရှေ့မြောက်ဘက်သို့
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှာ ကိုယ်ပိုင် သီချင်းသစ် မဆိုနိုင်သေး ပေ မယ့် မြူးကြွ သီချင်း များနှင့် မန္တလေး အယ်လ်ပိုင်းမှာ ရှိမှာဖြစ်ကြောင်း ခင်လေးနွယ် က ပြော သည်။
ခင်လေးနွယ်က သရုပ်ဆောင် လောကမှ အနားယူ လိုက်ပြီး ဂီတဘက် ကို ဇောက်ချ လုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”တစ်ကိုယ်တော်ခွေ ကိစ္စလည်း အခု လုံးပန်းနေတယ်။ အကောင်း ဆုံး ဖြစ်အောင် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့် အချိန်တွေကို ပိုယူ လိုက်တာပါ” ဟု ခင်လေးနွယ် က ပြော သည်။
”ခင်လေးနွယ်က တစ်ကိုယ်တော် အခွေ တစ်ဖက် ရှိုးတစ်ဖက်ကြောင့် အခွေ မထွက်နိုင်သေးတာကြောင့်လည်း ပါတယ်”ဟု ၄င်းက ဆက်ပြောသည်။
”အခု အတီးက ၁ဝ ပုဒ်လောက် ပြီးပြီ၊ ဆိုတာကတော့ ၆
Posted by Gentle Men at 7:39 AM No comments:
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်စဉ်က တပ်မတော်၏ ပါဝင်မှုကို သံသယ ရှိခဲ့သော်လည်း လက်ရှိအချိန်တွင် တပ်မတော်ကို တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့များက ပိုမို ယုံကြည်လာကြောင်း အစိုးရနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးနေသော တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များ ကိုယ်စားပြု တစ်နိုင်ငံလုံး
ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ လေယာဉ်ပေါ်မှာ ဥရောပ နိုင်ငံသား ၂ ဦးရဲ့ ခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့ ပတ့်စ်ပို့တွေကို အသုံးပြု ထား တဲ့ ခရီးသည် ၂ ဦး ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကနဦးသတင်းတွေနဲ့ အတူ သူတို့ဟာ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ လည်း
အမေရိကန် စွန့်ဦး လေယာဉ်မှုး Amelia Earhart ကအတ္တလန္တိတ် သမုဒ္ဓရာကို တစ်ဦးတည်း ဖြတ်ကျော်ခဲတဲ့ ပထမဆုံး အမျိုးသမီး အဖြစ် ကျော်
သေတော့ ပြည်သူတွေ .. သူတို့ ကတော့
လုံခြုံရာကနေ သွေးထိုးမြှောက်ပေးနေကြရုံပဲ ..
ဖားလား ငါးလား မြန်မြန်ကွဲတာပေါ့ From:ME
အသက်နှစ်ဆယ်ပြည့်တော့မယ့် ဝါဆိုမိုးဦး ကတော့ မင်္ဂံလာဆောင်တာကို အားကြမိတယ် ဆိုပဲ
ဝါဆို ခုနှစ်လပိုင်းဆို အသက်နှစ်ဆယ် ပြည့်ပြီ။ဒါပေမယ့် Valentine's Day တိုင်း ရည်းစားမရှိတာ နှစ်နှစ်ဆယ်ရှိပြီ။ အဲဒါကို တော်တော်စိတ်ညစ်တယ်။ ဒီနှစ်မှာ အနုပညာရှင်တွေရော၊ Public တွေရော မင်္ဂံလာအရမ်းဆောင်ကြတော့ အားကျမိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဖြေသိမ့်စရာက ဘာလဲဆိုတော့ ဝါဆို
Posted by Gentle Men at 10:07 AM No comments:
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုအကြောင်းပြု တရုတ်၊ ကုလားတွေပါဝင်လာမှာစိုးတယ်ဟု ဦးဝီရသူမိန့်ကြား
အမျိုးသားရေးနှင့်ပတ်သက် လျှင် သမ်္မတကြီး
ဦးသိန်းစိန် အပေါ် အပြည့်အ၀အားကိုး ကြောင်း၊
ပုဒ်မ ၅၉ (စ) နှင့် ပတ် သက်၍ ဒေါ်အောင်ဆန်း
စုကြည် ကို အကြောင်းပြုပြီး တရုတ်၊ ကုလားများ
ပါဝင်လာမည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း
စု ကြည်တစ်ယောက်တည်းဆိုပါက အပြည့်အ၀
သဘောတူမည်ဖြစ် ကြောင်း အမျိုးဘာသာ
သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် မြန်မာ
ဆရာတော်ဦးဝီရသူက မိန့် ကြားသည်။
““အမျိုးသားရေးနဲ့ပတ်သက် လို့ သမ်္မတကြီးဦးသိန်းစိန်အပေါ် ကို အပြည့်အ၀အားကိုးတယ်။ စိုးရိမ်တာတစ်ခုကတော့ ၅၉ (စ) မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းပြုပြီး
Posted by Gentle Men at 9:40 AM No comments:
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ပါတီကို အပြတ်အသတ် အနိုင်ယူမည်ဟု သူရ ဦးရွှေမန်း ပြောကြား
ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲနှင့် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူထု ထောက်ခံမှု အများဆုံး ရရှိထားသော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD ပါတီ) ကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အပြတ်အသတ် အနိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရ ဦးရွှေမန်းက ထုတ်ဖော် ပြောကြားသည်။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD ပါတီ) ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကိုလည်း ကြံ့ခိုင်ရေးက ယင်းသို့ အနိုင်ရအောင် ပြုလုပ်မည်ဟု ပြောဆိုထားကြောင်း
Posted by Gentle Men at 9:35 AM No comments:
ဟုတ်သော်မှန်သော် အတိကျမပြောနိုင်သော ဖေ့စ်ဘုတ်မှပြည်တွင်းသတင်းအတို
ညဘက်တွေမှာ အုပ်စုလိုက် ဆိုင်ကယ်စတန့်
လုပ်တာတွေ၊ ပြိုင်ကား ကားစတန့်လုပ်
တာတွေကြောင့် ယာဉ်အန္တရာယ် ဖြစ်မှာ
အသစ်ဖောက်လုပ်လိုက်တဲ့ ၆၆ လမ်းမ(၃၂x၃၅ ကြား)လမ်းမပေါ်မှာ ညကိုးနာရီနဲ့ ဆယ်နာရီဝန်းကျင်လောက်တွေမှာ
ဒီနေ့တစ်နေ့တာရဲ့ပထမဆုံးဖုန်းမည်သံ ကတော့စိတ်မကောင်းခြင်းတွေနဲ့ စတင်ခဲ့ရပါတယ်။
"ဟလို..ဒိုက်ဦးလား..အေး ..ငါ ရန်ကင်းပါ"
သတင်းတစ်ခုကိုပါ သူငယ်ချင်း ဆက်ပြော
တယ်။"မင်းကြားပြီး ပီလား ၊ ငါတို့ မိခင်
တပ်က 2IC ကျသွားတယ် "
၂၀၁၁ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ ပုဂ္ဂလိကနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့သော ဆက်သွယ်ရေး၊ လျှပ်စစ်၊ သဘာဝ
အရင် ကြားရှိခဲ့တဲ့ facebook News Feed
ပြောင်းမည့်ကိစ္စကို ယနေ့ ဖေ့ဘုတ်ရုံးချုပ်
တည်ရှိရာ Menlo Park တွင် အတည်
ပြုပြောကြားလိုက်ပါပြီ။ ယခု ကျတော်တို့ထံသို့ရောက်ရှိလာမဲ့
ဖေ့ဘုတ်ရဲ့ ဒီဇိုင်း အသစ်ကတော့
ပိုပြီး ကြီးမားတဲ့ ရုပ်ပုံတွေနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အရင် က iCon တွေနဲ့
ရူပ်ပွနေ တတ်တဲ့ ဘယ်ဘက်ကော်လံက
၁၉၉၄ မှာ ဒေါက်တာနိုင်အောင်
သတင်းပေးလို့ဌေးနိုင်ကို ဖမ်းဆီး
နှိပ်စက် စစ်ဆေးခဲ့တယ် ။ BBC က
(ဝင်းနိုင်ဦး) က စစ်ကြောရေး တာဝန်ခံလေ ။
ဘယ်လောက်တောင် နှိပ်စက်သလဲ စဉ်း
စားကြည့်ကြ ။ စစ်မြေပြင်မှာ သေမှာ
မကြောက်တဲ့ဌေးနိုင် ထောက် လှမ်းရေးပါလို့ 
ဝန်ခံ လိုက်ရတယ် ။ ဗီဒီယိုရိုက် မှတ်တမ်းတင်ပြီး နိုင်ငံတကာကို ဝါဒဖြန့် ပြီး မိုးသီးတို့ တစု တော်လှန်ရေး လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက် စစ်မြေပြင် သေဖေါ်သေဖက်
တပ်မတော်နေ့မှာ တပ်မတော်က ဘာလက်နက်တွေ ပြသသွား လဲ ??...
ထိုင်းအလှကုန် ၉ မျိုး ဘေးအန္တရာယ်ရှိဟု အက်ဖ်ဒီအေြေ...
မလေးရှားလေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှု မြန်မာ ပူးပေါင်း ရှာဖွေ...
“KIA ဘယ်လို ယုတ်မာလိုက်လဲဆိုတာ နှင်းမေသာ မေးကြည့်ပ...
ပိုမို ဆန်းကြယ်လာနေတဲ့ မလေးရှား လေယာဉ်ပျောက်ဆုံးမှု...